Soosaarka Indhaha Shiinaha iyo Warshad | Wangtong
Bilowga ah si aad u dalbato hooska isha hoos sawir.
Sida loo sawiro qurxinta indhaha maalinlaha ah
Tilaabada 1: Adoo isticmaalaya burushka hooska weyn ee isha, mari hooska salka midabkiisu yahay midab khafiif ah oo ku dul yaal godka isha oo xaaq indhaha.
U aad midab midab khafiif ah ama indho fiiqan ah oo aan aad u badnayn.
Tallaabada 2: isticmaal midab aad doorbideyso inaad qoto dheer ku yeelatid isha dhammaadkeeda, fiiro gaar ah u yeelo qaddar yar oo is dul-saaran, laakiin sidoo kale marar badan cidhifka daciifka ah, baalalka indhaha oo barara ilmaha inta ugu badan ee suuragalka ah si looga fogaado midabka luul hooska isha ayaa noqon kara.
Talaabada 3: Codso midab isku mid ah hooska isha sida ku xusan Tallaabada 2 burush faahfaahsan si aad u qoto dheeraato isha hoosteeda.
Tallaabada 4: ugu dambayntii sida ay caadooyinkooda gaarka ah u yihiin burushka indhaha ee mascara waxay noqon kartaa, ma sawiri doono eyeliner ilmaha ma sawirayo hooska isha sidoo kale waa suuragal, sida maalinlaha ah ee loo yaqaan 'eye eye eye' ma aha mid aad u fudud.
Bilowga ah si aad u dalbato hooska isha hoos sawir
Qodobka ugu muhiimsan ee bilowga ah si ay u sawiraan hooska wanaagsan ee isha ayaa ah isugeynta badan ee hooska isha. Matte eye eye waa midka ugu adag ee lagu daboolo. Dusha sare ee midabka luulku wuxuu ka dhigi karaa qurxinta indhaha mid toosan
Tilaabada 1: foomka suniyaha ee ku sawiray hadba sida suniyaha iskiis, dooro qalinka suniyaha ee u diro midab si uu ugu sawiro qaab baal sunnaha si haboon naftiisa.
Tallaabada 2: Xullo saldhig qarsoodi ah oo u dhow midabka maqaarkaaga si loo daboolo cilladaha indhaha.
Talaabada 3: budada dabacsan si ay u daboosho iftiinka baalasha indhaha, tani waxay ka dhigi kartaa qurxinta indhaha mid sii waara, ha isku wareerin qurxinta.
Tallaabada 4: mari mariinka indhaha oo ah bunni khafiif ah burush kuna dabool baalasha sida midab aasaasi ah. Hooska mari godka isha.
Tilaabada 5aad: cadawgeedka isha ee dhexdhexaadka ah oo caday madaxiisa iyo dabada isha, meesha ay u badan tahay inaanay u baahnayn dheeh.
Tallaabada 6: Khamriga caday isha hooska isha ee saddexagalka dambe ee isha ka dibna sii qoto dheer, ka yar sidii hore, weli ma u baahan tahay suuxin.
Tallaabada 7: Farta oo dhan oo awood badan ayaa soo noqotay. Dhex gasho hargabka indhaha ee dahabiga ah oo ku dhaji bartamaha indhahaaga.
Tallaabada 8: dooro burush qabasho dawakh leh oo ku habboon, soohdinta hooska isha ee dawakhaadku way awoodaa.
Tallaabada 9: Mar labaad mari mariinka indhaha isha dahabka ah ee loo yaqaan 'champagne', ku dhaji bartamaha baalashaada.
Tallaabada 10: si fiican u sawir gudaha iyo dibedda isha, indha shareerka indhaha, qurxinta indhaha ayaa la sawiray.
Hore: Aasaaska dareeraha